Shirkado Mashiinka Sifeeya Wareegtada Bacriminta Granule Wareegtada iyo Warshadda | YiZheng
Mashiinka Mashiinka Wareega Wareega ee Bacriminta waxaa loo isticmaalaa qaabeynta geedi socodka bacriminta kala duwan ee dabiiciga ah iyo bacriminta bio-organic ka dib marka la shiido. Waxay noqon kartaa mid si xor ah u dhigma leh granulator cusub oo bacrimiye ah, flat granulator saxafadeed iyo giraanta dhinta giraanta. Mashiinka qaabeynta qaabeynta waxaa la dooran karaa labo ama saddex heer cajaladood. Ka dib markii granules-ka la safeeyey, waxsoosaarka wareega iyo habsami u dhammaystiran ayaa laga sii daayaa wax soo saarka.
Waa maxay Mashiinka Wareega Wareega Bacriminta Organic?
Bacriminta dabiiciga ee asalka ah iyo granules bacriminta isku dhafan waxay leeyihiin qaabab iyo cabirro kala duwan. Si looga dhigo jajabyada bacriminta inay u muuqdaan kuwo qurux badan, shirkadeena waxay soo saartay mashiinka nadiifinta bacriminta dabiiciga ah, mashiinka qashinka lagu bacrimiyo iyo wixii la mid ah.
Mashiinka nadiifinta bacriminta dabiiciga ah waa qalab nadiifiya wareeg ah oo ku saleysan bacriminta dabiiciga ah iyo granulator bacriminta isku dhafan. Waxay ka dhigeysaa walxaha isku-roga ah inay isku rogaan kubbadda, mana laha wax soo noqosho ah, heerka qaabeynta kubbadda sare, xoog wanaagsan, muuqaal qurux badan iyo ku-dhaqan firfircoon. Waa qalab ku habboon bacriminta dabiiciga ah (bayoolaji) si loo sameeyo qaybo goobooyin ah.
Codsiga Mashiinka Wareega Wareega Bacriminta
Bacriminta kala-soocida bio-organic ee ka dhigaysa peat, lignite, dhoobada bacriminta dabiiciga ah, caws sida wax ceeriin ah
Bacriminta granulation organic oo ka dhigaysa digada digaag sida wax cayriin
3.Keef bacrimin ah oo ka dhigta keega soy-bean sida alaabta ceeriin
Cunto isku dhafan oo ka dhigaysa hadhuudh, digir, cawska cunto ceeriin ah
5.Bio-feed oo ka dhigaysa caws miraha dalagga sidii wax cayriin
Faa'iidooyinka Mashiinka Wareega Wareega Bacriminta Organic
1. Soo saar sare. Waxay noqon kartaa mid jilicsan oo lala shaqeeyo hal ama dhowr granulators isla waqtigaas geedi socodka, xallinta faa'iido darrada in granulator waa inuu ku qalabeeysan yahay mashiinka dahaadhka.
2. Mashiinka waxaa lagu sameeyaa labo ama in ka badan oo silsilad ah si nadiif ah oo hagaagsan, maaddada ayaa soo bixi doonta dhowr jeer ka dib nadiifinta, sheyga la dhammeeyey wuxuu leeyahay cabir isku mid ah, cufnaan isdaba-joog ah iyo muuqaal fiican, iyo heerka qaabeynta waa ilaa 95%.
3. Waxay leedahay qaab dhismeed fudud, aamin ah oo lagu kalsoonaan karo.
4. Hawlgal fudud iyo dayactir.
5. La qabsi adag, waxay ka shaqeyn kartaa deegaanno kala duwan.
6. Isticmaalka korantada oo hooseeya, qiimaha wax soo saarka oo hooseeya iyo faa'iidooyinka dhaqaale ee sarreeya.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Wareega Wareega ee Bacriminta
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Wareega Wareega
Ballaca saxanka (mm)
Xajmiga Qaabka (mm)
Hore: Mashiinka Mashiinka Baakadaha Labaad ee Labaad
Xiga: Mashiinka Difaaca Bacriminta Joogtada ah
Hordhac Waa maxay Mashiinka Dufcadda Bacriminta Dynamic Automatic? Qalabka isdabajoogga Bacriminta Dynamic Dynamic Automatic waxaa badanaa loo isticmaalaa miisaanka saxda ah iyo qiyaasta qalabka badan ee khadka soo saarista bacriminta ee joogtada ah si loo xakameeyo qadarka nafaqada loona hubiyo sameynta saxda ah. ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Mashiinka Baakadaha Laba-jibbaarada ah? Mashiinka Baakadaha Xisaabaadka Laba-geesoodka ah ee "Double Hopper" waa mashiin wax lagu duubo oo otomaatig ah oo ku habboon hadhuudhka, digirta, bacriminta, kiimikada iyo warshadaha kale. Tusaale ahaan, xirxirida bacriminta granular, galleyda, bariiska, qamadiga iyo miraha granular, daawooyinka, iwm.